San Htun May 17, 2014 at 5:18 AM
တူတူပဲ...မြတ်ကြည်ရေ..တခါတလေ တွေးမိတယ်...ဘာလို့ အပင်ပန်းခံ၊ စိတ်ဒုက္ခတွေ ခံနေပါလိမ့်လို့ ...ဒါပေမဲ့ မြတ်ကြည်ရေ Education can't take away from you..ဒီလိုဟာတွေ ဖတ်ရပြန်တော့လည်း ဒီလိုပဲ ဟိုလှည့်၊ ဒီလှည့်နဲ့ပြီးသွားမှာပါပဲလေလို့တွေးမိပြန်ရော...အဲဒီအချိန်ဆို ဆရာဖေမြင့်ရဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား၊ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ရင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ရတယ် ကာတွန်းလေးက တကယ်မိုက်တယ်...တောင်တက်တဲ့အချိန်မှာ ငါ့ကို ဘယ်သူမှ မခိုင်း၊ မတို်က်တွန်းဘဲ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ် ကျင်းတူးပြီး ရှာနေပါလားလို့တွေးမိတယ်...တောင်ထိပ်လည်းရောက်ရော အလှဆုံးရှုခင်းကို မြင်ရတော့ ပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်တယ်လို့ခံစားရပြန်ရော...Aja Aja Fighting !
မြတ်ကြည် May 18, 2014 at 6:10 PM
Thank you Ama San Htun :) Feeling quite relieved now.
မြတ်ကြည် May 18, 2014 at 6:17 PM
စာကျက်ရတာ စိတ်ကုန်နေလို့ အားပြန်ရှိအောင် တင်လိုက်တာ။ စက်တင်ဘာမှာ စာမေးပွဲ တစ်ခု ဝင်ဖြေမလားလို့။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်က လာမယ့်လမှာ BLS, ACLS သင်တန်းကြေးပေးပြီး တက်ခိုင်းလို့။ ဂျူတီလည်းဆင်း သင်တန်းလည်းတက် သင်တန်းမှာလည်း စာမေးပွဲဖြေရဦးမယ်။ စက်တင်ဘာအတွက် စာလုပ်ချိန်က ၃ လ ပဲရတာ။ အဲလို။